Isticmaalka Kombuterka gacanta (Lapp Topp) ayaad moodaa inuu si aad ah u kordhayo maalinba maalinta ka dambeysa, waxayna Qubaro badani sabab uga dhigeen waxyaalo farabadan haba ugu horeysee sahalka habda meeshii la doono loo qaadan karo, fududeykiisa, iyo Shabakada Caalamiga oo loo adeegsan karo ayadaan loo baahneyn wax xiriir kabel ama Fiilo ah, oo� meelkasta oo la joogo la awoodi karo in la dhex mushaaxo shabakada Internet-ka loo yaqaan.
Inkastoo qiimihiisu uu aad u sareeyo marka la barbardhigo Kombuutarka caadiga ah ee aan la qaadan karin hadana dadku waxay u xiiseeyaan si aad ah.
Horumarka Tiknoolajiyada casriga ah ayaa dad badani aaminsan yihiin inay mareyso meeshii ugu sarreeysay inta la ogyahay, ayna khasab tahay inay markaan tahay markii laga yaaci lahaa, iyagoo cuskisiinaya maahmaahdii Soomaaliyeed ee oreynaysay �DARANDOORIYAABA NAASI-NAASI� . Machadka Nolosha Shaqaalaha ee Sweden ayaa daaha ka roggey khatarta caafimaad ee uu leeyahay Kombuutarka Gacanta lagu qaato, waxayna sheegeen inuu leeyahay gacmo xanuun, madax-xanuun iyo indho xanuun saa�id ah.
Alan Toomingas oo macahadkan ka tirsan ayaa ka digay isticmaalka farahabadan ee aaladaan iyo qofka markuu hayo shaqo culays badan oo keeni karta welwel iyo kurbo� farabadan inuusan isticmaalin. Hadiise wakhti yar oo kooban la isticmaalayo dhib ma leh ayuu yiri.
Dhibaatada kombuutarka gacanta lagu qaato waxay ka timid shaashada (monitor) iyo teebka (Key-board) oo aan waxba u dhaxeyn oo isku dhegen, khatartaana waxaa lagu yareen karaa ayuu yiri Alan mar uu waramayey warsidaha Dagens Nyheter in qofku isticmaalo shaashad (monitor) iyo Teeb (Key-board) kala qeybsan oo aan isku ool.
Khatartan laga digayo ayaa moodaa inaysan saameyn weyn ku yeelen Soomaalida iyo qaxootiga ku dhaqan wadankan, maadaama aysan inta badan awoodin inay iibsadaan aaladaan oo aad qaali u ah oo ay inta badan Isticmaalaan Kombuutarka caadiga ah.